कोभिड १९बाट भएको मृत्यु आम मृत्यु होइन, यो हत्या हो, मोदी सरकार जिम्मेवार छ – Dcnepal
कोभिड १९बाट भएको मृत्यु आम मृत्यु होइन, यो हत्या हो, मोदी सरकार जिम्मेवार छ
प्रकाशित : २०७८ वैशाख १६ गते २२:२२
यस्ता तर्कहरू लिएर यसपाली मौन नबस्नुहोस्।
१ उनले भन्नेछन्, हामी, इटाली, फ्रान्स, ब्राजिलमा पनि कोरोनाको मृत्यु भएको छ ।
२। उनीहरुले भन्नेछन्, त्यहाँ पनि भेन्टिलेटर, औषधिको अभावका कारण मानिसहरुको मृत्यु भएको छ ।
३ उनले भन्नेछन्, मोदी मात्र होइन, सबैले चुनावी र्याली गरिरहेका थिए ।
आउनुहोस्, हरेक बुँदालाई एक एक गरी सामना गरौं।
१ यदाकदा हरेक देशमा कोरिनाको कारण मृत्यु भएको थियो। अहिलेसम्म औपचारिक तथ्यांकअनुसार भारतमा भन्दा अमेरिका र ब्राजिलमा बढी मृत्यु भइसकेको छ । तर, भारतमा अधिकांशको मृत्युको कारण कोरोना नभई उपचारका कारण भएको हो ।
अक्सिजनको अभाव, औषधिको अभाव, शैय्या र अस्पतालको सुविधा नहुनुका कारण यस्ता छन् । त्यसैले यी मृत्युहरू हत्या होइनन् ?, ती सरकारी हत्याहरू हुन्। यदि यी सबै सुविधाहरू भएको भए तिनीहरूलाई हत्या भनिने थिएन, तिनीहरूलाई मृत्यु भनिन्थ्यो।
अभिभावकको लापरबाहीका कारण बच्चाको मृत्यु भएमा त्यो पनि भारतको कानुन बमोजिमको अपराध हो।
मरेकाहरू सबै हामीले कुरा गरेका जीवित मानिसहरू थिए। उहाँहरु हाम्रा साथीहरु, आफन्तहरु, सुख र दुःखका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको आधिकारिक हत्या हाम्रो आँखा अगाडि भएको छ। हामीले पीडामा मरेको देखेका छौँ। हरेकले सास फेर्नका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए।
अनि हामी सबैलाई थाह छ, यी औपचारिक व्यक्तिहरू मात्र हुन्। हामी सबैलाई थाह छ, जताततै मृत्युहरू लुकेका छन् । अमेरिकामा मृत्यु लुकाउन गाह्रो छ, तर भारतमा हामीसँग मृत्यु लुकाएको वर्षौंको अनुभव छ।
त्यसकारण, यी मृत्युहरू सरकारी हत्याहरू होइनन्?
२ यो पनि सत्य हो कि भेन्टिलेटर, औषधि आदिको अभावका कारण बाह्य मुलुकका मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ । तर कोरनाको पहिलो लहरमा।
मोदी सरकारले एक वर्षको समय पूरा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केयर्स फण्डका नाममा जनताबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन भएको थियो। छोराछोरीले गल्छी भाँचेर पैसा दिए, तर मोदी सरकारले के गर्यो ?
जनवरी महिनामा हामीले आफ्नो छाती मारिदिन थाल्यौं र हामीले कोरोनामाथि विजय हासिल गरेका थियौं। तिनले संसारभरिका विशेषज्ञहरूलाई औंलाले औंल्याउन थाले। सधैंजस्तै यी मानिसहरूले शिक्षित मानिसहरूलाई हेला गर्न थाले।
कल्पना गर्नुहोस्, यी मानिसहरूलाई दोस्रो लहरको बारेमा थाहा थिएन, त्यसैले उनीहरूले बंगालमा लाखौं मानिसहरू जम्मा गरेर भेलाहरू आयोजना गरिरहेका थिए। अथवा थाह थियो र ती अझै पनि भेलाहरू थिए। यी दुवै रूप एउटा ठूलो सरकारी असफलताको उदाहरण हो।
यदि तिमीहरूलाई थाहा थिएन भने, सिंहासनमा बस्नु बेकार छ। यदि तिमीहरूलाई थाहा छ कि यी हत्याका लागि तिनीहरू नै जिम्मेवार छन्।
तिनीहरूले सडकको गोमनजस्ता खोपहरू लिने हदसम्म राज्य सरकारहरूले खोप मागेका थिए। आज पनि भारतको दुई प्रतिशत जनसंख्यामा समेत पूर्ण खोप हुन सकेको छैन ।
तिनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न, औषधिको प्रबन्ध मिलाउन, राज्य सरकारहरूलाई बेड बढाउन मदत गर्न सक्थे किनभने तिनीहरूसित पीएम केयरका लागि अरबौं रुपैयाँ थियो। तर तिनीहरूले त्यसो गरेनन् । तिनीहरू सर्पको रूपमा त्यो पैसामा बसेको एक वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो।
त्यसैले यी मृत्यु हरू सामान्य मृत्यु होइनन् तर हत्याहरू हुन्। मलाई लाग्छ, आईपिसी अन्तर्गत आपराधिक लापरवाहीका लागि मोदी सरकारलाई अभियोग लगाउनुपर्छ। यी हत्याहरूको लागि तिनीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ।
३ यो पनि साँचो हो कि चुनावी तालमेल सबै गरिन्छ, तर फरक छ । को को छन् सरकारी मेसिन? तपाईलाई थाहा छ भारतीय सरकार कति विशाल छ । अक्टोपसजस्तै यसले पनि तपाईंको जीवनको हरेक क्षेत्रमा मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईंले के खानुहुन्छ, कति कमाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ र के बेच्नुहुन्छ, सबैलाई थाह छ। अनि तपाईं मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिनीहरूले कोरोनाको दोस्रो लहरको बारेमा थाहा पाएनन्?यस अवस्थामा निर्दोष बनिरहानु द पुत्र अफ अभिनन्दनको छ, निर्दोष छोरा, कोरोना हत्यारा, ढाक्चोप क्यारान, प्रयास, ए।पी।जे। को छोरा। तिनिहरुलाई सब कुरा थाहा थियो। सो तिनिहरुले बङ्गाल जित्नुपरेको थियो ।
त्यसैकारण, द स्टेट अफ साहेबमा एक चरणको मतदान सम्पन्न भयो। तिनिहरुलाई हरेक बखत समय चाहिन्छ। उनी भैलावारुको सन्देश फैलाउँछिन्।तिनिहिरुको मुखमा रगत छ। तपईँको चुनाव हरेक दललाई लक्षित गरिएको छ । होइन, देशका लागि काम गर्न, देशलाई अगाडि लैजान देश ठिक पार्ने हरेक पार्टीको उद्देश्य होस। अनि, महामारी समाप्त भएपछि हरेक पार्टीले देश बाच्न सक्नुपर्छ।
तिनिहरुलाई सबकुरा थाहा थियो। र तनिहरुले जानी जानी देशलाई मृत्युको मुखमा फ्याँके।
तिनीहरूले भनेझैं, राजाले भनेझैं देश। अनि मैले राजा शब्द प्रयोग गरेँ किनभने गणतन्त्रमा कुनै राजा छैन, तर हाम्रोले आफूलाई राजा ठान्छ।
यस पटक तिनीहरूको तर्कको सुहाउँदो जवाफ दिनुहोस्। शान्त नहुनुहोस्। तिनीहरू सबैलाई चिच्याउँछन् र चुप मान्छन्। हामीले आफ्नो काँधमा अर्थ उठाएका छौं। यी चिराहरूको बत्तीले हामीलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाइरहेको छ। अनि अगाडि बढ्ने बाटो स्पष्ट छ, हामीले तिनीहरूको बन्धन, घमन्ड र घमन्ड हटाउन सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। द वायरबाट साभार